Daily Prayer: July 2008
Posted by Nay Linn Aung at 1:22 PM No comments:
We are nothing whithou Jesus !
1 A Psalm of David.The LORD is my shepherd; I shall not want.
အဘဘုရားသခင် ဤနေ့ရက်၊ အချိန်၊ နာရီကိုပြင်ဆင်ပေးပါသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖ၊ နောင်လာမည့်နေရက်တိုင်းတွင်လည်း ကိုယ်တော်နှင့်နီးကပ်စွာ နေထိုင်၍ဘ၀အသက်တာလမ်းခရီးတစ်လျှောက် ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ဘုရား၏ အလိုတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်နိူင်ရသောအခွင့်ကို ပေးသနားပါအဖ၊ ဆက်လက်၍ဆုတောင်းလိုသည်မှာ ရန်ကုန်၌ ကျန်ရစ်သော အိမ်ထောင်မိ့သားစုတွင် အငယ်ဆုံးသော သားငယ်မှသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လှပြီဖြစ်သော အဘိုးတိုင်အောင် ကျန်မားခြင်းခွန်အား၊ တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်သော အစာအဟာရ နှင့်တကွ လူတို့ကြံစဉ်၍ မမှီနိူင်သော စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ခြင်းမျာဖြင့် ပြည့်စုံကုံလုံကြွယ်ဝစွာခံစားနိူင်ရသော အခွင့်ကိုပေးသနားပါအဖ၊ အထူးဆုတောင်းလိုသည်မှာ အိမ်ထောင်မိ့သားစုတွင် အသက်အရွယ်အားဖြင့် ကြီးရင့်သော အဘိုး ဦးကိုင်း၊ အမိုး နှင့် အန်းဌေးလေးတို့အား ကျန်းမာခြင်းအခွင့်ကို ပေးသနားပါသောကြောင့် ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်မြတ်ကို ချီးမွမ်းပါ၏ ၊ ကျွန်တော်မျိုး၏ ဇနီးသည်အားလည်း စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်တကွ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့မှကင်းဝေနိူင်သောအခွင့်ကို ပေးသနားပါအဖ၊ ကျွန်တော်မျိုး၏ ချစ်လှစွာသော သားငယ်ကိုလည်း ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ဘုရား၏ လက်တော်သို့အပ်ပါ၏ ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ဘုရား အလိုရှိသည့်အတိုင်း ပုံသွင်း၍ ပဲ့ကိုင်လမ်းပြပါအဖ၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် ဤနေရာ ဤဌာနသို့ ရပ်ရွာကိုစွန့်၍ ကိုယ်တော်ရှင်ပို့ဆောင်လမ်းပြသည့်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည်မှာ ဤသားငယ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်အဖ၊ ကိုယ်တော့်ရှင်အလိုတော်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းနိူင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနားပါအဖ၊ ဆက်လက်၍ဖော်ပြဆုတောင်းလိုသည်မှာ ကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်တွင် လေမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခဆင်းရဲးမှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော သူများကိုသတိရ၍ ဆုတောင်းပါသည်အဖ၊ ဤကဲ့သို့ ဒုက္ခသုက္ခမျိုးစုံကို ရင်စည်း၍ ခံစားနေရသော အိမ်ထောင်မိ့သားစုများ အတွက် အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အရေးများ နှင့် လိုအပ်သော အစာအဟာရများကိုလည်း ကိုယ်တော်ရှင်သာလျှင် ပြင်ဆင်ပေးသနား တတ်စွမ်းနိူင်သော အရှင်ဖြစ်ပါသည်အဖ၊ ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ဘုရား၏ အကြံအစည်တော်အတိုင်း ပါဝင်ဖြည့်စွမ်းနိူင်ရသော အခွင့်ကိုလည်းပေးသနားတော်မူပါမည့်အကြောင်း တစ်ပါတည်းသော သားတော် သခင်ယေရူ၏ နာမတော်မြတ်၌ ရိုသေးလေးမြတ်စွာဖြင့် ဆုတောင်းအပ်ပါသည်အဖ။
Posted by Nay Linn Aung at 10:29 AM No comments: